Accueil > Gazetin'ny nosy > Zotram-pitanterana eo Ambohijatovo : Manakorontana sy mampitohana lavareny ny fifamoivoizana
Efa tsy rariny intsony ny ataon’ireo zotra fitanterana 119, 128, 147, 178, 146, 193 miantsona etsy Ambohijatovo isan’andro. Rehefa mitsoka kiriorioka ilay polisy eo andohan’Analakely dia mirongatra sy mirodorodo mibahan-dalana 119, 128, 147, 178, 146, 193 avokoa ireo zotra ireo. Eo amin’ny ilany an-kavanana ao amin’ny fiantsonan’ireo zotra ireo anefa dia misy fiara tsotra sy fitanteram-bahoaka mitan-dahatra izay manara-dalana. Tonga ny fitohanana lavareny noho izany korontana ataon’ireo zotra miainga tampoka izany.Sady mijanona mamono motera izy ireo no miandry kiriorioka. Atrehin’
ilay polisy mijoro eo fotsiny izany korontana vokatry ny fitohanana izany. Lasa ny fiara any aoriana be any no tonga voalohany ery ambany ary zara raha fiara folo na roambinifolo no isan’ny fiara alefan’ny polisy amin’iny fotoana iny. Tsy misy fandraisan’andraikitra ataon’ilay polisy mpandrindra ety ambony kanefa dia hitany izao ny fitohanana aterak’izany. Voabahan’ireo fiara fitanterana tsy manara-dalàna, 162 ireto fiara fitanterana 161, 196, 129, 164 sy fiara tsotra izay mira mizotra ho any Analakely.
Koa manaitra ny tompon’andraikitra isan-ambaratongam-pahefana amin’ny fandaminana ny fiantsonana eo Ambohijatovo izay mampitaraina ny vahooaka mpampiasa io lalana io. Tena fantiantoka ho an’ny fiara fitanterana manara-dalàna ny fisongonana tsy ara-dariny ataon’izy ireo. Voasazy miaraka amin’ireo fiara tsy manaja fifamoivoizana ireo ny hafa tan-dalàna. Ary tsy vitan’izany fa sady mbola mampiasa ny hafetsena koa ireo zotra 119 izay milaza fa hatreo Ambohijatovo no farany raha tokony eny amin’ny 67 ha ny toeram-piantsonana farany. Miandry ny rehetra fa na ny polisy mpandrindra ny fifamoivoizana aza tsy mahafehy ny asany manoloana io olana isa-maraina ,atoandro ary hariva io.